खराब छैनौँसमेत भन्न किन सक्नुहुन्न तपाईं पुरुषहरू ?
रुपन्देहीको मणिग्राममा १३ चैतमा बालअधिकारबारे एक कार्यक्रम थियो । लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी, प्रदेश सरकार, नागरिक समाज, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि र बालबालिका सो कार्यक्रममा सहभागी थिए ।
दिनभरको छलफलबाट उठेका विषयवस्तुलाई संकलन गरी प्रस्तुत गरिरहेका बेला बीचमै एक किशोरीले प्रश्न गरिन्,‘ हामी बालिकाहरू कसरी सुरक्षित रहने ? घरदेखि विद्यालय, बजार, टोल छिमेकमा हामी जहाँ पनि असुरक्षित छौँ भने त्यो पालिका कसरी बालमैत्री भयो ?’
बालअधिकारबारे काम गर्ने दिग्गजहरूले किशोरीको सुरक्षाबारे बिर्सिएको देखेपछि उनले प्रश्न गरिन्, ‘यस्तो कार्यक्रममा समेत हाम्रो सुरक्षाको कुरा हुँदैन भने हामीले कहाँ विश्वास गर्ने ?’ बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरेका, घोषणा भएका र घोषणाउन्मुख पालिकाका प्रतिनिधिले आफ्ना सिकाइ, अनुभव र अबको बाटो बताइरहँदा बालसंरक्षणको पाटोमा पनि छलफल गरिरहेका थिए । बाल संरक्षणभित्र किशोरीको सुरक्षाको पक्ष पनि नआउने कुरा भएन । तर, दिनानुदिन भोगिरहेको समस्या त्यस्तै भाषामा समाधान गर्ने उपाय किशोरीले खोजेकी थिइन् ।
सरकारले निर्माण गर्न लागेका बालबालिकासम्बन्धी दश वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनामा आफ्ना सुझाव दिन चैत पहिलो साता काठमाडौंमा बालबालिका भेला भएका थिए । सातै प्रदेशबाट छानिएका बालबालिका एकै ठाउँमा भेला भई आफ्ना सुझाव दिइरहेका थिए । त्यहीबीचमा एक बालिकाले प्रश्न गरिन्, ‘के छोरीको जन्मसँग डर, त्रास र शंकासँगै आउँछ ?’
घर, टोलछिमेक, विद्यालय, सामाजिक संस्थाहरू जहाँ गएपनि छोरी भएर यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भन्छन् आखिर किन ? उनले प्रश्न गरिन्,‘ हामी असुरक्षित हौं कि हाम्रो कलिलो दिमागमा तिमी कमजोर छौँ वा पुरुष जति अपराधी हुन उनीहरूबाट जोगिनुपर्छ भन्ने सिकाइएको हो ?’ दिनानुदिन भइरहेका बलात्कार र यौन हिंसातर्फ संकेत गर्दै उनले भनिन्, ‘जीवनको उज्यालो बाटो सिकाउनेहरूबाट पनि हामी सुरक्षित छैनौं भने हामी कहाँ जाने ?’
१३ वर्षको उमेरमा एक बालिका आफ्नै बाबुबाट बलात्कृत भइन् । छोरीमाथि भएको अपराध थाहा पाएर पनि आमा बोल्न सकिनन् । आमा नै मौन बसेपछि बालिकाले पनि केही गर्न सकिनन् । चुपचाप घटना सहिरहिन । ६ महिनाभन्दा बढीसम्म यस्तो पीडा सहेपछि एकदिन बालिकाले साथीलाई घटनाबारे बताइन् । घरमा बाबु नभएका बेला साथीको सहारामा आमासँग सवाल जवाफ गरिन्, बालिकाले । त्यसपछि आमाछोरीको साथमा उभिइन् र घटना बौद्ध प्रहरीमा आयो । बाबु जेल गए । छोरीमाथि भएको अपराधलाई ढिलै भए पनि आमाले प्रतिकार गरिन् । सात जुनीसँगै विताउने कसम खाएर अग्निको फन्को लगाएर विवाह गरेको बिर्सेर छोरीको साथमा उभिइन् । जसका कारण श्रीमान जेल गए, उनको सात जुनीको साथी छोरी भइन् ।
मुद्दा चलिरहेका बेला संरक्षण गृहमा बसेकी बालिका अहिले युवा अवस्थामा पुगिन् । मजदुरी गरेर आमाले पढाइरहेकी छिन् । गत साता उनले आफ्नो विगतलाई एक पटक स्मरण गरिन् । उनले प्रहरीमा दिएको बयान, सरकारी वकिल र अदालतमा दिएको बयानभन्दा परिपक्क थियो । घटना त्यही तर प्रस्तुति र आफ्नो भोगाइ, सिकाइलाई मिश्रण गरी अबको बाटो समेत बताइरहेकी थिइन् । उनको आवाज पिच्छे हलमा रहेकाहरू सुक्क-सुक्क गरिरहेका थिए ।
आफ्नो घटना विवरण सुनाइसकेपछि उनले प्रश्न गरिन्, ‘म जस्ता छोरीको पीडा सुन्दा मन नदुख्ने कस्तो बाबु, दाइ, भाइ, अंकल, गुरु हो तपाईं ?’ हलमा सहभागी पुरुषहरूतिर संकेत गर्दै उनले भनिन्, ‘माफ गर्नुहोला मैले हजुरहरूलाई खराब भन्न खोजेको हैन, एक महिलाको पीडामा त मन दुखेन-दुखेन तर पुरुष जति बलात्कारी हुन, यौन दुराचारी हुन, अपराधी हुनभन्दा पनि तपाईंको मन चसक्क हुन्न भने के ले बनेको छ तपाईंको मन ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘किन हामी खराब छैनौं समेत भन्न सक्नुहुन्न तपाईं पुरुषहरू ?’ अपराधीलाई कारबाही गर, त्यो घटना हुनुमा बालिकाको कुनै गल्ती छैन भन्ने सोच नआउनु नै अपराधलाई स्वीकार गरेको आफ्नो बुझाइ रहेको उनले भनिरहँदा हलमा सुकसुकसँगै ताली पनि बज्यो ।
‘भाइ जति बेला घर आए पनि हुने, जहाँ डुले पनि केही नहुने तर म एकछिन ढिला आउँदा त्यही भाइले नै केटी भएर ‘राति-राति’ बाहिर भनेर प्रश्न गर्ने ?’ ‘मेरो शरीरभन्दा बढी माया गरेको मेरो सानो भाइले नै मलाई किन त्यसरी रवाफ देखाउन सक्यो ?’ जबसम्म पुरुष शक्तिशाली हुन महिला कमजोर र दयाका पात्र हुन् भन्ने समाजमा रहन्छ त्यो बेलासम्म यस्ता घटना भइरहन्छन् । उनले आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दै भनिन्, ‘आज अर्काकी छोरीमाथि भएको कुरामा किन बोल्ने भन्नेहरूलाई के थाहा त्यो घटना आफ्नै घरमा घट्छ र अपराधी आफ्नै वरपरको हुनेछ, के त्यतिबेला हामीले अर्काको घरको कुराभन्दा तपाईं मौन बस्न सक्नुहुन्छ ?’
सत्तरी वर्षका हजुरबुबाबाट बलात्कृत भएकी बालिका अहिले किशोरावस्थामा पुगेकी छिन् । सधैँ हजरवुबाको काखमा रमाउने गरेकी उनी १० वर्ष लाग्न नपाउँदै बलात्कृत भइन् । ‘हात समाएर हिँड्न सिकाएको हजुरबुबा नै मेरो सबैभन्दा ठूलो शत्रु भन्ने मैले कसरी थाहा पाउने ?’ उनले भनिन्, ‘अहिले आएर थाहा भएको छ त्यतिबेला हजुरबुबाले गरेको व्यवहारले दुर्व्यवहारको संकेत गरेको रहेछ, तर पराइ केटासँग बोल्न हुन्न, छोरी एक्लै हिँड्न हुन्न भन्ने घर, समाजले मलाई आफ्नैबाट दुर्व्यवहार हुन सक्छ, यस्तो व्यवहार दुर्व्यवहार हो र लुकाएर बस्नुहुन्न भनेर किन सिकाएन ?’ घरको ठूलो मान्छेलाई विश्वास नगरे कसलाई गर्ने ? आफ्नो विगतबाट पाठ सिक्न अरुलाई आग्रह गर्दै उनले भनिन्, ‘जब छोरीलाई बलियो छौँ, छोरा र छोरीमा भेदभाव छैन, दुर्व्यवहारका लक्षणहरू यस्ता हुन्छन् र त्यस्तो हुनासाथ उजुरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने वातावरण बन्दैन तबसम्म हामी सुरक्षित छैनौं ।’
काकाबाट बलात्कृत भएकी बालिका अहिले विगत बिर्सन चाहन्छिन् । तर, समाचारमा आफूजस्तै बालिकाहरू बलात्कृत भएको समाचार आउनासाथ कपालका रौं ठाडा हुन्छन् । कहिलेकाँही त त्यस्ता अपराधीलाई काटौं जस्तो हुन्छ । तर उनले मन थामेकी छिन् । कक्षा ७ मा पढ्दै गर्दा काकाले उनलाई राति बलात्कार गरे । यो कुरा उनले पहिला आमालाई भनिन् । आमाले उल्टै झपारिन् ।
अर्को दिन पनि घटना घट्यो । निरन्तर त्यस्तै भएपछि बालिका वाक्क भएर साथीकोमा रुँदै गइन् । दुई जना मिलेर प्रहरीको १०० मा फोन गरे । घटना प्रहरीमा पुग्यो । परिवारले मुद्दा लड्न मानेन । पोखरामा रहेको सेल्टरमा बालिकालाई प्रहरीले पठाएर मुद्दा अगाडि बढायो । बालिकाको बयानका कारण काका जेल गए । तर, साथीको लहलहीमा काकालाई फसाएको भनेर बालिकालाई आरोप लगाए । बाबुआमाबाट बालिका टाढा भइन् । अहिले सेल्टरमा बसेर अध्ययन गर्दैछिन् ।
यस्तै अर्को घटना छ दाइबाट बलात्कृत बालिकाको । बुबा खाडीमा । घरमा आमा, दाइभाइ र दुई दिदीबहिनी थिए । कतारबाट आएपछि दाइले धेरै रक्सी खान्थे । विवाह भएको थियो । रक्सी खाएर दु:ख दिने गरेको कारण श्रीमतीले छाडेकी थिइन् । दिउँसो घरमा उनले आफ्नै बहिनीलाई बलात्कार गरे । दाइबाट बलात्कृत भएको घटना बालिकाले पहिला आमालाई सुनाइन् । भाइबैनी साना थिए । आमाले परिवारभित्रको कुरा बाहिर लान हुन्न भनिन् । बालिकाले सोधिन् किन, ‘यो समाजले तिमीलाई नै नराम्रो भन्छ भयो छोडिदेऊ ।’ आमाको यस्तो जवाफ आएपछि बालिका बेस्करी रोइन् । अब कसलाई सुनाउने । यस्तो घटना भयो भने लुकाएर राख्न हुन्न भन्ने उनले विद्यालयमा सुनेकी थिइन् । तर, कसरी कहाँ गएर भन्ने ?
‘एक पटकलाई जे भयो-भयो दाइ जेल जान्छ । झन् बदनामी हुन्छ अब यस्तो गर्दैन मैले कुरा गर्छु भनेर कतारबाट बुवाले फोन गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘बुबाआमापछिको अभिभावक दाइ, दाइबाट म बलात्कृत भएँ, बुबाआमाले पनि साथ नदिए पछि मैले के गर्ने ? मर्ने अवस्थामा पुगेपछि साथीको सहारा पाँए र प्रहरीकोमा पुगे ।’
उजुरी गरेकै कारण परिवार गुमाएर सेल्टरमा बस्नु परेको दु:खेसो भने उनमा अझै छ । आमाको याद आउँछ तर दाइले दिएको पीडामा साथ नदिएको समाजकै कारण रहेछ भन्ने उनले अहिले बुझेकी छिन्, ‘महिला कमजोर र पुरुष बलियो छन्, पुरुषले जे गर्न पनि हुने पुरुष खराब भएपनि महिलाको चरित्रमा प्रश्न उठाउने यो समाजको कारण मेरी आमाजस्ता कति आमाले मनभित्र गाँठो पारेर छोरीको पीडाको आँशु पिइरहेका होलान् ?’ महिला भएकै कारण पीडाको आँशुलाई अमृत मानेर पिउनु पर्ने ? तर, पुरुष हुनासाथ जघन्य अपराध पनि समाजको प्रतिष्ठासँग जोडिने । कस्तो समाज हो यो र कसका लागि हो यो समाज ?,' उनले भनिन्, ‘आफ्नी चेलीलाई आफ्नो भन्न नसक्ने पनि के को समाज ?’
ट्युशन पढ्न सधैँ शिक्षकको घरमा जाने गरेकी बालिकालाई के थाहा तिनै शिक्षकले सिकाइको सहारामा बलात्कार गर्लान भनेर । मिजासिलो स्वभाव भएका ति शिक्षकले बालिकालाई राम्रोसँग सिकाउँथे । ट्युशनका कारण कक्षा १० को गणितको परीक्षामा राम्रो अंक ल्याइन् । आउँदै गरेको एसइईमा पनि राम्रो अंक ल्याएर पास हुने उनको इच्छामा तुवाँलो लाग्यो । परीक्षाको अघिल्लो दिन शिक्षकले एकान्तमा बोलाएर बलात्कार गरे । बलात्कार मात्र गरेनन् । कसैलाई भनेको खण्डमा बालिका र उनको परिवारलाई मार्ने धम्की दिए । त्यही धम्कीका कारण घटनाबारे कसैलाई भन्न सकिनन् । मनभित्र आँशुको नदी बगाएर भएपनि परीक्षा दिइन् । परीक्षा सकेपछि उनले घटनाबारेमा परिवारमा भनिन् । आमाबुबा दुवै घटना बाहिर ल्याउन, प्रहरीमा उजुरी गर्न तयार भए । तर, समाजका गन्यमान्य भन्नेहरू, राजनीतिक नेता, शिक्षकहरू घटना मिलापत्र गर्न लागे ।
‘मेरो शरीरमाथि खेलबाड भएको, मेरो विश्वासघात गरेको, मलाई कति पीडा छ बुझ्दै नबुझेर म कसरी मिलापत्र हुन सक्छ ?’ सबै बसेर गरेको सहमतिलाई बालिकाले मानिन्, ‘यस्तो घटनामा पनि मिलापत्र गर्ने भन्ने तपाईंहरू कस्तो हो ? मेरो बुबाआमा सोझा छन् भनेर जे पनि गर्ने, म अब प्रहरी कहाँ जान्छु ।’ यत्ति के भनेकी थिइन्, स्थानीय नेता बोले, ‘प्रहरीलाई पनि हामी मिलाउँछौं केही गर्न सक्दिँनौं ।’ त्यसपछि‍ बालिकाको मनमा झन आँट आयो । बाल क्लबमा हुँदा तालिम लिएको सम्झिइन् । र, बाल हेल्पलाई १०९८ मा फोन गरिन् । हेल्प लाइनले बालिकालाई लिएर गयो । प्रहरी पनिसँगै आयो र मुद्दा दर्ता भयो ।
बाल क्लबका सदस्यहरू भेला भएको कार्यक्रममा बालबालिकाले आफूले भोगको समस्याहरू बताइरहेका थिए । यही बेला एक बालिकाले भनिन्, ‘बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार हुनुमा किन हामीलाई दोषी ठान्छन् ?’ घरबाट विद्यालय जाँदा बाटोमा जिस्काउँछन् । साइकल चलाएर हिँड्दा केटाहरूले सिटी हान्छन् । बजारमा हिँड्दा पनि अनेक शब्दहरू सुन्नुपर्छ ।
गाडीमा भीडभाड हुनासाथ संवेदनशील अंग छुन आउँछन् । यस्ता घटना हुनुमा कसरी बालिका वा महिलाको दोष छ ? उनको यो प्रश्नले कार्यक्रमस्थल थर्कमान भयो । मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि, प्रहरी, अधिकारकर्मी उपस्थित यो कार्यक्रममा बालिकाले भनिन्, ‘एकातिर छोरी कमजोर हुन्छन् भनेर सिकाउनुहुन्छ अर्कोतिर छोरा भएर पनि केही गर्न नसक्ने भन्नुहुन्छ यस्तो हुर्काइ भएपछि कस्तो समाज बन्छ ? फेरि बलात्कारलाई मात्र घटना देख्ने तपाईंहरूका आँखामा लागेको पट्टी हटाउनुहोस् अनि अधिकारकर्मी हुँ भन्नुहोस् ।’
हो हाम्रो समाजमा बलात्कारलाई मात्र यौन हिंसाको घटनाको रुपमा लिइने गरेको पाइन्छ । त्यो अवस्था आउनुभन्दा पहिला नै धेरै घटनाहरू घटेका हुन्छन् । पिडकले बालबालिकालाई आफ्नो वशमा पार्न अनेक प्रपञ्चहरू रचेको हुन्छ । अनावश्यक नजिक हुने, चाहिनेभन्दा बढी प्रशंसा गर्ने, माया गरे जस्तो गर्ने, सहयोग गरेको नाटक गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यही बेला किन यस्तो गरिरहेको होला भन्ने थाहा नपाउँदा त्यो अवस्था बलात्कारसम्म पुग्छ । अर्कोतिर छोरीलाई कमजोर, अलावा, एक्लै हिँड्न हुन्न भनेर बन्धनमा राख्न खोज्नेहरूलाई अझै थाहा छैन सुरक्षा दिने भनिएका आफन्तहरूबाट नै बालिका बढी असुरक्षित छन् । प्रहरीमा दर्ता भएका घटनाहरू मात्र हेर्ने हो भने ८० प्रतिशत बलात्कारका घटना आफन्त र चिनेजानेकाबाट नै भएका छन् ।
जबसम्म छोरीलाई छोरासरह हुर्कने, घुमफिर गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म यस्ता घटना रोकिँदैनन् । छोरालाई शक्तिशाली, बलशालीको रुपमा हुर्काउने घरपरिवार र समाजले तिमी अपराधी बन्न हुन्न भनेर कहिल्यै सिकाएको छ ? आफ्नो छोरा बलात्कारी बनोस् भन्ने कुन चाहिँ अभिभावकले चाहेको हुन्छ र ? तर किन महिलालाई सम्मान गर्नुपर्छ उनीहरू पनि हामी समान हुन् भनेर किन सिकाइन्न । त्यसैको असर महिला हिंसाका घटना हुन् । बेलैमा सोचेर बालिका र किशोरीमा लगानी गरी उनीहरूको सशक्तिकरण गर्ने र किशोरहरूलाई छोरी पनि छोरा समान हुन्, उनीहरूले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार नसिकाउने हो भने जति नै कडा कानुन बनाए पनि यौन हिंसाका घटना कम हुँदैनन् । र, फेरि पनि बालिकाले भन्ने दिन आउँछ, ‘हामी कहाँ सुरक्षित छौँ?’
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २९, २०७७, १५:०९:००